Guardiola: “Fernandinho wuxuu ka ciyaari karaa boos walba intaan ka ahayn Goolhaye” – Gool FM
Guardiola: “Fernandinho wuxuu ka ciyaari karaa boos walba intaan ka ahayn Goolhaye”
Haaruun July 28, 2016
(Manchester) 28 Luuliyo 2016 – Tababaraha kooxda Kubadda Cagta Manchester City ee Waddanka Ingiriiska oo kala baranaya ciyaartoydiisa maadaama uu ku cusub yahay shaqada City ayaa waxa uu xaqiijiyay in ninka kooxda ugu tayada badan uu yahay Laacibka reer Brazil Fernandinho kaasoo uu sheegay inuu boos walba ka ciyaari karo.
“Waxaan u malaynayaa inuu ka ciyaari karo 10 Boos oo kala duwan, waxa uu leeyahay tayo uu uga ciyaari karo dhinac walba, waa laacib dheereeya, xariif ah, halgan badan kuna fiican kubaddaha hawada sare.” ayuu Guardiola ka sheegay Shir Jaraa’id.
Pep Guardiola ayaa ku caan baxay in uu kooxda uu layliyo uu mar walba ka dhex sameeyo xiddig ku haboon inuu ka ciyaaro booskii loo baahdo sida Bayer Munich-ba uu ka ahaa Philipp Lahm xilligii uu naadigaasi macallinka u ahaa.
Muxuu Kaka ka yiri la soo wareegistii Juventus ee Gonzalo Higuain?
Paul Pogba oo LABISKAN ku qishay in uu ku foolleeyahay Manchester United